Ridwaan oo waraystay Mawliid Macaane.
"Cabdulaahi Yusuf (waxa) uu dhistay maamulka Puntland, Shaati gaduudna Waxaa uu dhistay maamulka Koonfur galbeed, Morgan Asalkiisii ayuu uguuray, sidaas daraadeed Xuseen Caydiid iyo Gabyoow miyaa loo aqoonsan Karaa inay matalaan SRRC?" Mowliid Macaane
Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waraysi la yeeshay Gudoomiyaha ururka SAMO ahna Xogyaha Guud ee golaha SRRC sida uu ii sheegay MD. Mawliid Macaane oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Mawliid waxaa safarkiisa Ku weheliyay Cusmaan Xasan Cali Caato waxaana ay ii sheegay macaane in Caato uu uyimid Caruurtiisa joogta Nairobi halka isagana uu u yimid arimo Caafimaad.
Waraysigan oo uu la yeeshay Ridwaan Xaaji Cabdi weli oo ah Wriyaha IQRA ee magaalada Nairobi isla markaana Somalitalk iyo Goobjoog uga soo warama Kenya.
waxaana warsigu u dhacay sidatan:
Ridwan: Safarka aad Ku joogtaan Nairobi Mala kulanteen Saraakiisha Kenya?
Mawliid: Maya wax lama aanaan kulmin dawlada Kenya.
Ridwan: Qaabka ergooyinka ay uga qayb galayaan shirka Eldoret wali ma la'idiin soo gudbiyay?
Mawliid: maya wali wax naloo soo gudbiyay ma jirto laakiin waan sugaynaa.
Ridwan: shirka Soomaalida loo qaban doono sideed u aragtaan adiga, caato, finish iyo qanyare oo aad iisheegtay in aad tihiin afartiina isbahaysiga Nabada Gobolka Banaadir?
Macaane: Dhamaanteen waan soo dhowaynaynaa shirka dib u heshiisiinta soomaalida ee lagu qaban doono Eldoret, waxaana ka rajaynaynaa in lagu dhiso Dawlad qaran oo loo dhanyahay iyo in lagusoo afjaro dagaalka sokeeye.
Ridwan: waxaan la socdaa in aad is khilaafteen idinka iyo xubnaha kale ee SRRCda ku sugan dalka Itoobiya ma heshiiseen iminka?
Mawliid: SRRC waa anaga oo heshiis caalami ah magaca SRRC kula Gashay Kooxda Carta taasaana loo aqoonsanyahay SRRCda dhabta ah waxaana kuu sheegayaa in Cabdulaahi Yusuf uu dhistay maamulka Puntland, Shaati gaduudna Waxaa uu dhistay maamulka Koonfur galbeed, Morgan Asalkiisii ayuu uguuray, sidaas daraadeed Xuseen Caydiid iyo Gabyoow miyaa loo aqoonsan Karaa inay matalaan SRRC?
WARAYSIGII HORE EE IQRA LA YEELATAY MOWLIID MACAANE 1/4/2002
»Minnesota.... sanad kadib September 11 ! [wq.Ceynte]
Ethiopia oo Kulmisay RRA
kadib markii ay dawladda ethiopia xiriirka saaxiibtinimo layeelatay maamulka baydhabo waxaa ka siraadmay colaad salka ku haysa... GUJI.. 10/9
Daahir Dayax, Wasiirka Arimaha Gudaha DKG, oo waraysi siiyeye Radiodalmar GUJI
Wasiirka Arimaha Dibadda Jabuuti
oo lahadlay Jaaliyadda Soomaalida Kenya GUJI.. 10/9
*Guddoomiyaha qawmiyadda Carabta Somaliyed Oo sheegay... Wararkan oo dhan Ka akhri Halkan - GUJI..
UK: Kulankii Raabidada oo ka dhacay London
JAWAAB Pro.Samatar: FIQI TOLKII KAMA JANNA TAGO
Sidaas waxaa yiri Ciise Dhollowaa oo jawaab ka bixinayey hadalkii Prof. Samatar ee ahaa GUJI.. 9/9
MINNEAPOLIS : Suuqa Al-Karama waa suuq Soomaaliyeed oo kuyaal.. GUJI.. 9/9
Wardheere &Toddobaadkii 8/9
Jaamacadda Carabta oo Taageersan DKG
Sida ey qortay saxaafada Yemen waxaa eey go'aamiyeen Wasiirada arimaha dibada ee Jaamacadda carabta in GUJI..
Wareysi uu C/lahi Nuur Kolombo oo ka tirsan Bahda SagalRadio la yeeshey Ruug-cadaagi saxaafada Somali, Mr. Mohamed Hassan Kahin Riix Halkan
Khudbadii C/Raxman Jaamac Barre
kajeediyey shirka Beesha Sade ee kasocdey gobolka Gedo markay taariikhdu ahayd...GUJI..
Shirkii Kenya oo Dib Loodhigay
wasiirka arimaha dibada kenya ayaa sheegay in shirkii nabada Soomaalida uu noqon doono 30ka bishan IQRA.. 7/9
Axdi ma laha xabashidu lagu aaminaa [FAALLO]
WARARKA OGADEN - 7.9.2002
Dhirbaaxoyinkii ku dhacayay Ciidamada Nacabka Gumaysiga Itoobiya oo halkoodii ka soo socda GUJI..
Shir-DegDeg: Bahweynta Mudullood ee UK
Shir deg-deg ah oo ey isugu yimaadeen odayaasha, aqoonyahanada iyo dhallinyarada bahweynta Beesha Mudulood ayaa walaac ka muujiyey dagaaladdii.. GUJI.. 6/9